Baarlamaanka oo meel mariyay Sharciga Maxkamadda Dastuurka ee dalka : SomaliPress.tv
Mudanayaasha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay u codeeyeen Sharciga lagu dhisayo Maxkamadda Dastuurka ee dalka iyo mudada waqtigooda uu egyahay Guddiga Xuduudaha iyo Federaalka ee Madaxa banaan.
Markii ay Xildhibaanada ay u codeeyeen ajandayaashaasi ayaa waxaa natiijada ku dhawaaqay Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Mudane Jawaari ayaa ku dhawaaqay in Xildhibaanadu ay meel mariyeen qodobadaasi maadaama inta badan ay isku raaceen.
Dhinaca kale Guddoomiyaha Baarlamaaka Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa dignin culus u jeediyay Xildhibaanada ku jira Golaha Wasiirada ee aan soo xaadirin kulamada soo aadan ee Baarlamaanka oo uu sheegay in qodobo xasaasi ah looga hadlayo in kooramka ay ka soo qeyb galaana ay muhiim yihiin.
Guddoomiyaha ayaa shaaca kaqaaday in afti loo qaadayo wax ka bedelka qodobo Dastuurka ku jira sida qodobka 60 iyo qodobka 136aad farqadiisa labaad kuwaas oo ka hadlaya Mandate-ka hay’ado ka tirsan kuwa dowladda Federaalka Soomaaliya kuwaas oo sida uu sheegay ay uga sii baaraan dagayaan in firaaq hay’adahaasi dowladeed uusan imaan xilliga kala guurka.
Hadaba iyadoo lagu wado in la guda galo ka doodista qodobadaasi Dastuurka KMG ka jira ayaa Xildhibaanno ka hadlay Golaha Shacabka waxa ay gabi ahaan mid dib u eegis in lagu sameeyo ay tahay ku tilmaameen Dastuurka hadda iyagoo ku tala bixiyay in dib loogu noqdo Dastuurkii dowladda Dhexe ee uu majaraha u Hayay allaha u naxariistee Maxamed Siyaad Barre.
Category: WARARKA CUSUB
« Madaxweynaha iyo Madaxa UNCHR oo ka wadahadley xaaladda qaxootiga Soomaalida iyo barakaceyaasha “SAWIRRO”
Al-Shabaab oo degmada Jilib ku toogatay Kenyan ay ku eedeeyeen inay basaas ahaayeen »